Fizahana aretina Kit for 25-hydroxy vitamina D (fluorescence immunochromatographic sahy miteny)
Fa in vitro fizahana aretina fampiasana ihany
Vakio tsara io fonosana ampidiro talohan'ny mampiasa sy manaraka ny toromarika hentitra. Azo itokisana ny vokatra sahy miteny tsy azo antoka raha toa ka misy deviations avy ny torolalana ao amin'ity Insert fonosana.
-pitiliana Kit ho 25-hydroxy vitamina D (fluorescence immunochromatographic sahy miteny) dia fluorescence immunochromatographic sahy miteny ny hamaroan'isa mamantatra ny 25-hydroxy vitamina D (25- (NY) VD) ao amin'ny olombelona, na ranon-dra serum, izay tena ampiasaina hanombanana ny haavon'ny ny vitaminina D.It dia mpanampy aretina reagent.All tsara santionany dia tsy maintsy ho raisina ho mpikambana amin'ny alalan'ny fomba fiasa hafa. Fitsapana ity dia natao ho an'ny fahasalamana fampiasana matihanina ihany.
Vitamin D dia vitaminina, ary ihany koa ny steroid hormonina, indrindra anisan'izany VD2 sy VD3, izay struction dia tena mitovy. Vitaminina E3 sy E2 niova fo ny 25 hydroxyl vitaminina D (anisan'izany 25-dihydroxyl E3 vitaminina sy E2). 25- (NY) VD ao amin'ny vatan'olombelona, milamina struction, mifantoka avo. 25- (NY) VD maneho ny tontalin'ny vitaminina D, ary ny fiovam-po fahaizany ny vitaminina D, ka 25- (NY) VD no heverina ho ny tsara indrindra ho an'ny fanombanana famantarana ny haavon'ny vitaminina D.The-pitiliana Kit dia mifototra amin'ny immunochromatography ary afaka manome noho ao anatin'ny 15 minitra.
Fitsipiky ny fomba
ny hoditra manify ny fitaovana fitiliana dia mifono ny conjugate ny BSA sy 25- (NY) VD eo amin'ny faritra sy ny osilahy fitsapana manohitra ny bitro IgG antibody eo amin'ny fanaraha-maso ny faritra. Pad fanamarihana toerana dia mifono ny fluorescence marika manohitra ny 25- (NY) VD antibody sy ny bitro IgG mialoha. Rehefa naka fanahy santionany, 25- (NY) VD in santionany mitambatra amin'ny fluorescence marika manohitra 25- (NY) VD antibody, ary hanangana fifangaroana vita fanefitra. Eo ambany ny hetsika ny immunochromatography, ny sarotra fikorianan'ny tamin'ny lalana absorbent taratasy, rehefa nandalo ny fisedrana sarotra faritra, ny maimaim-poana ho fanamarihana toerana fluorescent miaraka 25- (NY) VD amin'ny membrane.The fitanan'i ny 25- (NY) VD dia ratsy ho an'ny fluorescence fifandraisany famantarana, ary ny fitanana ny 25- (nY) VD in santionany afaka hita amin'ny alalan'ny fluorescence immunoassay sahy miteny.
REAGENTS sy fitaovana nanome
25T fonosana singa :
.Test karatra tsirairay foil pouched amin'ny desiccant 25T
.amin'ny vahaolana 25T
.B vahaolana 1
.Package ampidiro 1
FITAOVANA ilaina NEFA TSY NANOMEZAN'I
Sample fanangonana fitoeran-javatra, fameram-potoana
SAMPLE famoriam-bola sy ny fitehirizana
1.The santionany fitiliana dia mety ho serum, heparin anticoagulant ranon-dra na ny EDTA anticoagulant ranon-dra.
2.According ny fitsipika teknika manangona santionany. Serum na ranon-dra azo foana santionany amin'ny 2-8 refrigerated ℃ ho an'ny 7days sy ny cryopreservation ambany -15 ° C ny 6 volana.
3.All santionany Aza Hivaingana-Thaw tsingerina.
Sahy miteny fomba
ny fitsapana paika ny fitaovana hahita ny immunoanalyzer boky fampianarana. Ny fomba fitsapana reagent dia toy izao manaraka izao
1.Lay kely reagents rehetra sy ny santionany amin'ny efitrano mari-pana.
2.Open ny Portable voaro Analyzer (WIZ-A101), hiditra ao amin'ny kaonty teny miafina fidirana araka ny fiasan'ny fomba ny fitaovana, ka hiditra ny mamantatra interface tsara.
3.Scan ny dentification fehezan-dalàna mba hahazo antoka ny fitsapana zavatra.
4.Take ny fitsapana foil karatra avy amin'ny harona.
5.Insert ny fitsapana karatra ho ao an-karatra slot, banjino ny QR code, ary mamaritra ny fitiliana zavatra.
6.Add 30μL serum na ranon-dra santionany ho A vahaolana, ary afangaro tsara.
7.Add 50μL B vahaolana ho fangaron etsy ambony, ary afangaro tsara.
8 .Avelao ireo zavatra mifangaroharo ny 15 minitra.
9.Add 80μL mifangaro ny sample tsara ny karatra.
10.Click ny "fizahan-toetra faneva" bokotra, rehefa afaka 10 minitra, ny fitaovana dia tonga dia mamantatra ny fitsapana karatra, dia afaka mamaky ny vokatry ny fampisehoana lamba ny fitaovana, sy ny firaketana an-tsoratra /-tsoratra vokatry ny fitsapana.
11.Refer ho ny ana-Portable afa-miala Analyzer (WIZ-A101).
25- (NY) VD ara-dalàna isan-karazany: 30-100ng / ML
Misy soso-kevitra fa ny tsirairay mametraka ny tenany laboratoara ara-dalàna isan-karazany mampiseho ny marary mponina.
TEST vokatra sy ny hevitry ny nofy
.Ny mihoatra noho ny tahirin-kevitra dia ny boky ampitoero ho elanelam-potoana io ny mamantatra angon-drakitra ity fitaovana, ary izany dia milaza fa laboratoara tsirairay dia tokony hanorina boky elanelam-potoana io ho an'ny mifanaraka pitsaboana dikan'ny ny mponina ao amin'io faritra io.
.Ny fitanan'i ny 25- (NY) VD dia ambony kokoa noho ny boky isan-karazany, sy ny fanovana batana na adin-tsaina dia tokony ho excluded.Indeed valiny ara-dalàna, dia tokony hanambatra pitsaboana famantarana aretina.
.Ny vokatry ny fomba ity dia azo ampiharina ihany ny boky isan-karazany naorin'ny fomba io, ary ny vokatra dia tsy mivantana ampy amin'ny fomba hafa.
.Other lafin-javatra mety hiteraka fahadisoana ihany koa ny vokatra eo amin'ny tratra, anisan'izany ny antony ara-teknika, miasa fahadisoana sy ny santionany antony.
Fitehirizana sy fitoniana
.Ny fitaovana dia 18 volana talantalana-ny fiainana manomboka amin'ny vaninandro fanamboarana. Mitahiry ny fitaovana maromaro amin'ny 2-30 ° C. AZA mandry. Aza ampiasaina any an-dafin'ny lany daty.
.Do tsy namoha ny nasiana tombo-kase mandra-paosy ianao vonona ny hanao ny fitsapana, sy ny tokan-tena-dia nanolo-kevitra fitiliana ampiasaina ho ampiasaina eo ambany takiana tontolo iainana (2-35 ℃ hafanana, hamandoana 40-90%) ao anatin'ny 60 minitra haingana araka izay azo atao.
.Sample diluent no ampiasaina raha vao nosokafana.
Fampitandremana sy fepetra
.Ny tokony hofehezina fitaovana sy voaro hamandoana.
.All tsara santionany dia nanan-kery amin'ny alalan'ny fomba fiasa hafa.
.All santionany dia ho raisina toy ny mety mandoto.
.DO tsy mampiasa expired reagent.
.DO TSY reagents fifampaherezana eo amin'ny fitaovana isan-karazany be tsy misy ..
.DO TSY ampiasaina fitsapana sy karatra misy fanary Accessories.
.Misoperation, tafahoatra na santionany kely dia afaka mitarika ny vokany deviations.
.As amin'ny misy sahy miteny totozy nampiasa hery fiarovana, ny mety ho fitsabahan'ny misy ny olombelona manohitra ny totozy hery fiarovana (Hama) ao amin'ny specimen. Santionany avy amin'ny marary, izay efa nandray monoclonal fiomanana ny hery fiarovana ho an'ny aretina na fitsaboana mety misy Hama. Toy izany dia mety hahatonga diso santionany tsara na ratsy diso vokatra.
.This fitiliana vokatry ny pitsaboana ihany no reference, dia tsy tokony ho toy ny hany fototry ny pitsaboana aretina sy ny fitsaboana, ny marary pitsaboana mpitantana dia tokony ho feno fiheverana mitambatra sy ny soritr'aretina, tantara ara-pitsaboana, laboratoara hafa fanadinana, fitsaboana valiny, EPIDEMIOLOGY sy ny vaovao hafa .
.This reagent ihany no ampiasaina ho an'ny serum sy ny ranon-dra fitsapana. Mety tsy hahazo vokatra marina rehefa ampiasaina ho an'ny santionany hafa toy ny rora sy ny fisotrony sy sns
Linearity 5 de / ML ny 120 de / ML havany fahadisoan-dàlana: -15% ho + 15%.
Linear fifandraisany coefficient: (R) ≥0.9900
araka ny marina Ny tahan'ny famerenana ho ao anatin'ny 85% - 115%.
(Tsy misy ny akora amin'ny interferent naka fanahy nanakantsakana ao amin'ny sahy miteny) Interferent Interferent fitanan'i
hemôglôbininy 200μg / ML
vitaminina E3 50mg / ML
1.Hansen JH, et al.HAMA Fanelingelenana ny Murine Monoclonal Antibody-Miorina Immunoassays [J] .J ny Clin Immunoassay, 1993,16: 294-299.
2.Levinson SS.The Heterophilic Nature ny hery fiarovana sy ny Anjara Asan'ny in Immunoassay Adilahy [J] .J ny Clin Immunoassay, 1992,15: 108-114.
Fanalahidin 'ny tandindona nampiasaina:
In Vitro-pitiliana Medical Device
Store amin'ny 2-30 ℃
Maka hevitra Torolalana ho Use
Address: 3-4 Floor, NO.16 Building, Bio-pitsaboana atrikasa, 2030 Wengjiao West Road, Haicang District, 361026, Xiamen, Sina
Previous: Fizahana aretina Kit for D-Dimer (fluorescence immunochromatographic sahy miteny)
Manaraka: Fizahana aretina Kit for Cardiac Troponin I (fluorescence immunochromatographic sahy miteny)
Fizahana aretina Kit for D-Dimer (fluorescence immuno ...
Fizahana aretina Kit for Cardiac Troponin I (fluoresc ...
Fizahana aretina Kit for Isoenzyme MB ny Creatine Kin ...